မပြောခင်မှာ စဉ်းစားပါ။ – Gentleman Magazine
သူတို့ပြောတဲ့စကားရဲ့ အကျိုးဆက်ကိုမသိပဲ ပြောချင်ရာပြောတတ်သူတွေကို သင်တွေ့ဖူးပါသလား။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အပြော ဒါမှမဟုတ် လုပ်ရပ်ကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြီး စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေကိုရော ကြုံဖူးပါသလား။ ဒီလိုအပြောမတတ်တာတွေက လူမှုဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်း အလုပ်အကိုင်အပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအပြောမတတ်တာမျိုးကို အခြားသူတွေဆီမှာ သင်တွေ့ဖူးသလို သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများစုဟာ သူတို့စိတ်ထဲရှိတာတွေကို မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို မျက်နှာလွှဲခဲပစ် ပြောချင်ရာပြောတတ်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စကားကို မဆင်မခြင်ပြောတဲ့အတွက် တဖက်သားကို ထိခိုက်စေပြီးမှ သူတို့ပြောမိလိုက်တာတွေအတွက် ပြန်နောင်တရ ၀မ်းနည်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြမ်းကျွံရင်နှုတ်လို့ရ စကားကျွံ့ရင်နှုတ်လိုမရဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွံ့ပြီးသားစကားအတွက် အဖတ်ဆယ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် စကားအပြောအဆိုက ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးပါသလဲ ? စီးပွားရေး ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေက အောင်မြင်မှု၊ ရှုံးနိမ့်မှုကို ကွာခြားသွားစေနိုင်တာကြောင့် သေချာစဉ်းစားပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ စကားလုံးကို ဂရုတစိုက်မရွေးချယ်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ချို့လည်း အောင်မြင်ကောင်း အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေတိုင်းက စကားပြောကောင်းသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၀)ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ John F.Kennedy ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ “အမေရိကန်နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့၊ သင်တို့အတွက် နိုင်ငံက ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို မမေးပါနဲ့၊ သင့်နိုင်ငံအတွက် သင်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသာ မေးပါ”ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စကားက နာမည်ကျော်လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းမှာ စိတ်ခံစားမှုတွေပါဝင်နေတတ်သလို ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းက အစပထမမှာ ဘယ်လို အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်မှုမရှိသလို ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဘယ်တော့မှမထင်လိုက်ပါနဲ့။ စကားလုံးတိုင်းမှာ စွမ်းအားရှိပါတယ်။ စကားလုံးတွေက စိတ်အားတက်ကြွမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ကျဆင်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
စကားလုံးတွေက အခြားသူတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ အပြင်လောကမှာ ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်ပေးနိုင်သလို ဖျက်စီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ စကားအပြောအဆိုကြောင့် အကောင်းအဆိုး နှစ်ဖက်စလုံးကို အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။
အေဒီ ၁၆၁ ကနေ ၁၈၀ အထိ စိုးစံခဲ့တဲ့ ရိုမန်အင်ပါရာအရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Marcul Aurelius က ဘ၀မှာ ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို နောက်ဆုံးလုပ်ရသလို လုပ်ဆောင်ပါ လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ သင့်စကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ဆုံးစကားတွေကို ပြောသလို စကားလုံးတိုင်းကို သေချာပြောဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ဘာမှမပြောတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကောင်းတာတစ်ခုခု မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာမှမပြောတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တိုင်းပြုပြည်ပြုပုဂ္ဂိုဟ်ကြီး Benjamin Franklin ကလည်း မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့စကားပြောတတ်ဖို့ထက် မလိုလားအပ်တဲ့စကားတွေကို မပြောတတ်ဖို့က ပိုခက်ခဲတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သင်ပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းက အရာအားလုံးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေနိုင်သလို၊ အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တဲ့အတွက် ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို ဖျက်စီးပျက်နိုင်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားပေးစကားတစ်ခွန်းက လူတွေကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။
အသံနေအသံထား၊ အမူအယာ စတဲ့ သင့်စကားပြောတဲ့ပုံစံက သင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို ထင်ဟပ်နေပြီး သင်ပတ်ဝန်းကျင်က အရာအားလုံးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ စကားအပြောအဆိုက သင့်ရဲ့အလုပ်မှာရော၊ လူမှုရေးဘ၀မှာပါ သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သလို ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဘာစကားပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောခင်မှာ စဉ်းစားပါ။ ကွဲပြားခြားနားမှုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ပွောတဲ့စကားရဲ့ အကြိုးဆကျကိုမသိပဲ ပွောခငျြရာပွောတတျသူတှကေို သငျတှဖေူ့းပါသလား။ တဈယောကျယောကျရဲ့ အပွော ဒါမှမဟုတျ လုပျရပျကို ခကျြခငျြးတုံ့ပွနျပွီး စှပျစှဲခကျြတှနေဲ့ တိုကျခိုကျတတျသူတှကေိုရော ကွုံဖူးပါသလား။ ဒီလိုအပွောမတတျတာတှကေ လူမှုဆကျဆံရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျသလို စီးပှားရေးကိစ်စတှမှောဆိုရငျလညျး အလုပျအကိုငျအပျေါမှာ မကောငျးတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုအပွောမတတျတာမြိုးကို အခွားသူတှဆေီမှာ သငျတှဖေူ့းသလို သငျကိုယျတိုငျလညျး ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ အလုပျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ သူငယျခငျြးတှကွေားပဲဖွဈဖွဈ လူအမြားစုဟာ သူတို့စိတျထဲရှိတာတှကေို မစဉျးစားမဆငျခွငျပဲ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီလို မကျြနှာလှဲခဲပဈ ပွောခငျြရာပွောတတျသူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ စကားကို မဆငျမခွငျပွောတဲ့အတှကျ တဖကျသားကို ထိခိုကျစပွေီးမှ သူတို့ပွောမိလိုကျတာတှအေတှကျ ပွနျနောငျတရ ဝမျးနညျးသှားတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွမျးကြှံရငျနှုတျလို့ရ စကားကြှံ့ရငျနှုတျလိုမရဆိုတဲ့အတိုငျး ကြှံ့ပွီးသားစကားအတှကျ အဖတျဆယျဖို့ ခကျခဲပါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှအေတှကျ စကားအပွောအဆိုက ဘယျလောကျအထိ အရေးကွီးပါသလဲ ? စီးပှားရေး ခေါငျးဆောငျတှအေတှကျ သူတို့ပွောတဲ့စကားတှကေ အောငျမွငျမှု၊ ရှုံးနိမျ့မှုကို ကှာခွားသှားစနေိုငျတာကွောငျ့ သခြောစဉျးစားပွောဆိုသငျ့ပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ စကားလုံးကို ဂရုတစိုကျမရှေးခယျြတတျတဲ့ ခေါငျးဆောငျ တဈခြို့လညျး အောငျမွငျကောငျး အောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈမှနျတဲ့ခေါငျးဆောငျကောငျးတှတေိုငျးက စကားပွောကောငျးသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
၁၉၆၀ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၂၀)ရကျနမှေ့ာ အမရေိကနျသမ်မတ John F.Kennedy ပွောခဲ့တဲ့စကားတဈခုရှိပါတယျ။ “အမရေိကနျနိုငျငံသားအပေါငျးတို့၊ သငျတို့အတှကျ နိုငျငံက ဘာလုပျပေးနိုငျလဲဆိုတာကို မမေးပါနဲ့၊ သငျ့နိုငျငံအတှကျ သငျဘာလုပျပေးနိုငျမလဲဆိုတာကိုသာ မေးပါ”ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စကားက နာမညျကြျောလူကွိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ပွောတဲ့စကားလုံးတိုငျးမှာ စိတျခံစားမှုတှပေါဝငျနတေတျသလို ကွီးမားတဲ့ သကျရောကျမှုတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ မနျနဂြောတဈယောကျ ဒါမှမဟုတျ အလုပျရှငျတဈယောကျရဲ့ စကားတဈခှနျးက အစပထမမှာ ဘယျလို အကြိုးအကွောငျး ဆီလြျောမှုမရှိသလို ထငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို ဘယျတော့မှမထငျလိုကျပါနဲ့။ စကားလုံးတိုငျးမှာ စှမျးအားရှိပါတယျ။ စကားလုံးတှကေ စိတျအားတကျကွှမှုကိုပေးစှမျးနိုငျသလို စိတျဓာတျကဆြငျမှုကိုလညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
စကားလုံးတှကေ အခွားသူတှကေို လှမျးမိုးနိုငျပွီး လုပျငနျးခှငျနဲ့ အပွငျလောကမှာ ဆကျဆံရေးတှေ တညျဆောကျပေးနိုငျသလို ဖကျြစီးပဈနိုငျပါတယျ။ စကားအပွောအဆိုကွောငျ့ အကောငျးအဆိုး နှဈဖကျစလုံးကို အကွီးအကယျြပွောငျးလဲသှားစနေိုငျပါတယျ။
အဒေီ ၁၆၁ ကနေ ၁၈၀ အထိ စိုးစံခဲ့တဲ့ ရိုမနျအငျပါရာအရှငျ၊ အတှေးအချေါပညာရှငျ Marcul Aurelius က ဘဝမှာ ဘယျကိစ်စကိုမဆို နောကျဆုံးလုပျရသလို လုပျဆောငျပါ လို့ ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ။ သငျ့စကားပွောမယျဆိုရငျလညျး နောကျဆုံးစကားတှကေို ပွောသလို စကားလုံးတိုငျးကို သခြောပွောဖို့ လိုပါတယျ။ တဈခါတဈလကေတြော့လညျး ဘာမှမပွောတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကောငျးတာတဈခုခု မပွောနိုငျဘူးဆိုရငျ ဘာမှမပွောတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျတိုငျးပွုပွညျပွုပုဂ်ဂိုဟျကွီး Benjamin Franklin ကလညျး မှနျကနျတဲ့နရောမှာ မှနျကနျတဲ့စကားပွောတတျဖို့ထကျ မလိုလားအပျတဲ့စကားတှကေို မပွောတတျဖို့က ပိုခကျခဲတယျလို့ ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ သငျပွောတဲ့စကားလုံးတိုငျးက အရာအားလုံးကို ပွီးမွောကျအောငျမွငျစနေိုငျသလို၊ အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးသှားစနေိုငျတဲ့အတှကျ ဂရုတစိုကျရှေးခယျြတတျဖို့ လိုပါတယျ။ မကောငျးတဲ့ စကားတဈခှနျးက လူတဈယောကျရဲ့ တဈနတေ့ာကို ဖကျြစီးပကျြနိုငျပါတယျ။ ဆနျ့ကငျြဘကျအနနေဲ့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အားပေးစကားတဈခှနျးက လူတှကေို ကနြေပျပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။
အသံနအေသံထား၊ အမူအယာ စတဲ့ သငျ့စကားပွောတဲ့ပုံစံက သငျဘယျလိုလူမြိုးလဲဆိုတာကို ထငျဟပျနပွေီး သငျပတျဝနျးကငျြက အရာအားလုံးအပျေါမှာ သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ စကားအပွောအဆိုက သငျ့ရဲ့အလုပျမှာရော၊ လူမှုရေးဘဝမှာပါ သငျရဲ့အောငျမွငျမှုကို ဆောငျကဉျြးပေးနိုငျသလို ရှုံးနိမျ့မှုတှကေို ပေးဖို့လညျး အဆငျသငျ့ပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘာစကားပဲဖွဈဖွဈ မပွောခငျမှာ စဉျးစားပါ။ ကှဲပွားခွားနားမှုကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
Previous: လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာသလား စမ်းစစ်ချက် (၅၀)
Next: ပထမဆုံးအကြိမ်ချစ်တင်းနှောရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့